COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020 - ewa.mg
COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020
News - Santé - COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy.
L’article COVID-19: Statistique du 15 Septembre 2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Milaza ny hanao fanambarana goavana i Norbert Ratsirahonana amin’ity faran’ny herinandro ity. Antenaina araka izany fa hanao ampamoaka ny antony nisakanany ny jeneraly Camille Vital tsy ho kandidà mpisolo toerana an’i Andry Rajoelina, nandritra ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 ny tenany… Isan’ireo nahazo fanasana nanatrika ny lanonana fitokanana ny Azura Foulpointe-Toamasina ny jeneraly Camille Vital. Nanontany ity kandidà laharana faha-10 tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 ity ny antony niverenany tamin’i Andry Rajoelina ny mpanao gazety nahazo izany fanasana izany. “Noho ny fiangavian’ny ranabavy Christine Razanamahasoa vao avy nivoaka ny hopitaly no nampiverina ahy…”, hoy ny jeneraly Camille Vital. Napetraka taminy ihany koa ny fanontaniana hoe: “fa naninona no tsy neken’i Andry Rajoelina tampoka teo ny naha kandidà anao kanefa nafarany avy tany Genève ianao fa ho kandidà mpisolo toerana azy?”. “Ratsirahonana no nanome loha an’i Andry Rajoelina niteny taminy hoe “fitondrana efa eo am-pelatanan’ny Merina ve omena Tanindrana indray”…!”, hoy ihany ity praiminisitry ny HAT teo aloha ity. Notendrena ho ambasadaoro tany Genève ny jeneraly Camille Vital taorian’ny filankevitry ny minisitra HAT ny faha-28 jona 2012, rehefa nosoloin’ny praiminisitra Omer Beriziky ny faha-20 desambra 2011. Andro vitsivitsy talohan’ilay simena natao teny Andranomena naha lany ho filohan’ny TGV an’i Edgard Razafindravahy anefa dia nantsoin’i Andry Rajoelina nody an-tanindrazana ny jeneraly Camille Vital, fa hisolo toerana azy amin’ny fifidianana filoham-pirenena noho ny fisian’ny “Ni…Ni”. Efa nanomboka ny fivoriana sy fanomanana rehetra tao amin’ny trano fonenan’ny jeneraly Camille Vital tetsy Ivandry. Tampoka teo nefa nisy iny fifidianana anatiny teo amin’ny antoko TGV teny Andranomena iny, ka lany tamin’izany i Edgard Razafindravahy. Avy hatrany dia notsoahan’i Mamy Ravatomanga tao amin’ny jeneraly Camille Vital daholo ny zavatra rehetra efa natomboka. Naneho ny tsy fanoherany izany fanapahan-kevitra izany ny tale jeneralin’ny prezidansa, Mamy Ratovomalala ka dia noroahan’i Andry Rajoelina avy hatrany dia ireny niaraka nanangana ny antoko Hiaraka Isika ireny ny jeneraly Camille Vital sy Mamy Ratovomalala. “…Fitondrana efa eo am-pelatanan’ny Merina ve homena Tanindrana indray”. Io teny io araka ny nambaran’ny jeneraly Camille Vital no nataon’i Norbert Lala Ratsirahonana, antony nandakàna azy tampoka tsy ho kandidà mpisolo toerana an’i Andry Rajoelina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Fa iza tokoa moa izany ity Norbert Ratsirahonana ity? Zafy Albert sy Didier Ratsiraka Manamarina io teny nataon’ny jeneraly Camille Vital tany amin’i Azura Fouplpointe ve ireto tranga roa ireto? Naato tamin’ny andraikitra maha filoham-pirenena azy ny profesora Zafy Albert ny faha-5 Septambra 1996, rehefa avy naongan’ny solombavambahoaka maro an’isa, izay tsy iza fa i Norbert Lala Ratsirahonana, izay lasa filoham-panjakana mpisolo toerana sady lehiben’ny governemanta ihany no tao ambadik’izany “fanonganam-panjakana” izany. Mbola i Norbert Lala Ratsirahonana ihany koa no atidohan’ilay “1er tour” de vita” ny taona 2002 nahatonga ny amiraly Didier Ratsiraka voatery nanao sesitany ny tenany tany Frantsa. Antenaina araka izany fa ho isan’ny zavatra hotenenin’i Norbert Lala Ratsirahonana mandritra izany fanambarana hataony amin’ity faran’ny herinandro ity izany ny mikasika io antony nandakàna an’i Camille Vital io. Marihina moa fa nenjehina sy namoahana IST mihitsy i Mamy Ratovomalala sy Camille Vital ny harivan’ny fanisam-bato, fihodinana voalohany tamin’iny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013 iny, ary i Andry Rajoelina mihitsy no niditra mivantana tamin’ny hainoamanjery nanitsakitsaka ny grady jeneraly teny am-bozonan’i Camille Vital, sy niampanga ity farany ho nikasa hamono ho faty an’i Marc Ravalomanana. L’article Norbert Ratsirahonana : Ampamoakan’i Camille Vital? est apparu en premier sur .L’article Norbert Ratsirahonana : Ampamoakan’i Camille Vital? a été récupéré chez Triatra.
Hivaha tsy ho ela ny olana. Nanatanteraka avy hatrany ny toromariky ny filoham-pirenena ny eo anivon’ny governemanta sy ny faritra ary ny CUA. Hisy ny fandaminana vaovao ny fizarana ny fanampiana “Sosialim-bahoaka”.« Atsahatra aloha ny fizarana ny Vatsy tsinjo fa hisy ny fanadihadiana eny ifotony ho an’ireo tena tokony hisitraka izany. Ny 11 aogotsitra indray vao hozaraina izany », hoy izy ireo tetsy Ampefiloha, omaly. Nofaritana tamin’izany ny mason-tsivana ka anisan’ny hisitraka izany ireo tsy anasa na koa ireo tapaka asa sy tena sahirana. Eo koa ireo tsy manan-koraisina. Nohitsin’ireto tompon’andraikitra ireto fa tsy azo ekena ny kiantranoantrano sy ny fiangarana na koa ny fitanilana amin’ny fizarana ny fanampiana. « Antony nahatonga ny fandaminana vaovao izany sady ho ao anatin’ny mangarahara. Miandry ny lisitra izy. Hapetraka avy eo ny rafitra ahafahan’ireo olona mitaraina ka tena hotsinjovina ireo tena marefo », hoy izy ireo.Nambaran’izy ireo fa ilaina koa ny fahatsapan-tena sy ny fihavanana ka mifampitsinjo. Mba ireo tena mila ny fanampiana no hisitraka izany. Anisan’ny hanaovana ny hetsika ireo renivohi-paritany enina, miampy ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana, i Moramanga, i Nosy-Be ary ny any Antsirabe.« Hofantarina ireo mipetraka amin’ny trano, ny loham-pianakaviana. Havaozina koa ny karne, hampanarahina fenitra. Tsy hisy intsony hitangorona eny amin’ny biraon’ny fokontany », hoy ihany izy ireo.Hidina ifotony koa ny mpiasan’ny minisitera, ny faritra, ny kaominina hitety tokantrano hanao ny fanisana. « Tsy tokony hisy intsony hitaraina fa tsy mahazo », hoy izy ireo.Synèse R. sy Njaka A.L’article Niato ny fizarana ary napetraka ny mason-tsivana: hisitraka ny Vatsy tsinjo ireo “tapaka asa sy tena sahirana” a été récupéré chez Newsmada.
Jeux - News - Ao Raha
LALAO «ORANGE E-SPORT EXPERIENCE» :: Mpilalao malagasy telo hifaninana any Dakar
Hanana solontena telo amin’ireo mpilalao dimampolo avy amin’ny firenena iraika ambin’ny folo mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena, “Orange E-Sport Experience”, hatao any Dakar, Sénégal, i Madagasikara. Hotanterahina any an-toerana, amin’ny 5 – 6 desambra ho avy izao ity hetsika fanao isan-taona aty Afrika ity. Hiaro ny voninahitr’i Madagasikara amin’izany i Ranto Manoro Ratsimiliavahoaka (Big_Tom_2138) eo amin’ny lalao “Street Fighter” sy Mamitiana Michel Rakotoarison (Gogo) eo amin’ny lalao fifaninanana manamory fiarakodia amin’ny “Asphalt” ary i Mamitiana Herilanto Ralainaivo (Rayan) eo amin’ny lalao baolina kitra PES 2019. Nanainga ny alahady lasa teo, nihazo an’i Dakar, ireto mpilalao malagasy ireto. Ny orinasam-pifandraisana Orange Madagascar niaraka tamin’ny fikambanana e-Sport Mada no nikarakara ny fifaninanana teto an-toerana nahafahana nifantina azy telo mirahalahy ireto. Mandritra ny hetsika ho an’ny Afrikanina tandrefana, “1e Salon Ouest Africain” ao amin’ny Dakar Digital Show no hanaovana izany. L’article LALAO «ORANGE E-SPORT EXPERIENCE» :: Mpilalao malagasy telo hifaninana any Dakar est apparu en premier sur AoRaha.
FITSARAM-BAHOAKA TANY FENOARIVO ATSINANANA :: Vehivavy no voalaza fa nampirisika ny famonoana ireo pôlisy telo lahy
Miara-manao famo­torana an’ireo olona miisa iraika amby roapolo voasambotra, izay voarohirohy tamin’ny famonoana ireo pôlisy telo, tany Fenoarivo Atsinanana, tamin’ny 24 oktobra lasa teo, ny zandary sy pôlisy misahana ny heloka bevava any Toamasina. Araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Pôlisim-pirenena dia “vehi­vavy no niaingan’ny fampirisihana ny hamonoana ireo pôlisy”. Isan’ireo voasambotra ihany koa ny filohan’ny fokon­tany Ambodihazina, toerana nitrangan’ity famo­noana mpitandro filaminana ity. Raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany dia hatolotra ny Fitsarana, anio, any Toamasina ireo olona voarohirohy rehetra ireo. Vita ny famotorana ka notazonina eo anivon’ny Sampana misahana ny heloka bevava eo anivon’ny zandarimaria any an-toerana izy ireo, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny Pôlisim-pirenena. Vono olona, fikomiana ary halatra no vesatra hiam­pangana ireo olona miisa iraika amby roapolo ireo. Ny roa ambin’ny folo tamin’izy ireo dia voasambotra tany Ambodihazina ary ny sivy kosa dia tany Fenoarivo Atsinanana. “Araka ny fanambaràna nataon’ireo olona ireo tao anatin’ny fanadihadiana sy ny voafaritra fa fiaiken-keloka nataon’ny sasany tamin’izy ireo dia mbola tsy maintsy hitohy ny famotorana ity raharaha ity. Hahakasika olona hafa ihany koa izany”, hoy hatrany ny avy amin’ny Pôlisim-pirenena. L’article FITSARAM-BAHOAKA TANY FENOARIVO ATSINANANA :: Vehivavy no voalaza fa nampirisika ny famonoana ireo pôlisy telo lahy est apparu en premier sur AoRaha.
Nandavo olona enina tao anatin’ny 48 ora ny covid-19
Misoko mangina ny isan’ireo maty na mihena aza ny tranga vaovao. Olona roa indray no nodimandry, ny asabotsy teo ka avy eto Analamanga sy Diana izy ireo. Niampy efatra ireo lavo, omaly alahady ka iray avy any Vakinankaratra sy Matsiatra Ambony.Roa kosa ireo namoy ny ainy any Alaotra Mangoro, tao amin’ny hopitalin’Ambatondrazaka ka vehivavy 60 taona sy lehilahy 78 taona izy ireo. Enina izany ireo matin’ny coronavirus tao anatin’ny roa andro. Tafakatra 223 ireo matin’ity valanaretina ity eto amintsika.Miisa 82 kosa ireo tranga vaovao tao anatin’ny 48 ora ka ny asabotsy teo ny 49 amin’izany. Mitombo tahaka ny isan’ny maty koa ny isan’ireo mbola tsaboina sy arahi-maso. Niampy 13 izany, omaly alahady ka tafakatra 1 182 izany izao.Na izany aza, nihena 11 ireo anaty fahasarotana ka 26 ireo “forme grave”. Miisa 16 kosa ireo sitrana ka tafakatra14646 ireo efa nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana.Synèse R.L’article Nandavo olona enina tao anatin’ny 48 ora ny covid-19 a été récupéré chez Newsmada.